[Tatitra] Teknolojia Ho an’ny Fangaraharana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Novambra 2018 13:41 GMT
Vokatry ny efa-bolana nikarohana momba ireo tanjona, fanamby, fahombiazana, sy ny fiantraikan'ireo tetikasa teknolojika an-tambajotra izay mikendry ny fampiroboroboana ny fangaraharana, fandraisana andraikitra ara-politika, sy ny fandraisana andraikitra amin'ny maha-olompirenena ao Amerika Latina, Afrika ambanin'i Sahara, Azia Atsimo-Atsinanana, Azia Atsimo, Shina, ary Eoropa Afovoany & Atsinanana ity tatitra ity. Naharakitra tranga 37 taminà fandalinana tetikasa teknolojika marimpototra ny ekipa iray nisy mpikaroka rejionaly valo. Na dia tsy ahitana afa-tsy famintinana isaky ny tranga fotsiny aza ity tatitra ity, afaka jerena ao amin'ny tranonkalanay ny tafatafa feno, ao anatin'izany ny podcast am-peo sy rakitra mifandray amin'izany. Ankoatra ireo fandinihana lalina ireo tranga ireo, naharakitra lisitrana tetikasa mihoatra ny 30 ihany koa izahay, izay manome torohay fototra voafariparitra sy ny toejavatra manodidina ireo tetikasa mifandray amin'izany.
Mizara telo ity tatitra ity. Manadihady ireo endrika maro samihafa misy eo amin'ny fanaovan-gazety mpanaramaso nentim-paharazana ary ny haino aman-jery an-tambajotra izay miantehitra amin'ireo loharanon-drakitra vantambantana (tsy misy sivana) ilay fampidirana, izay matetika tonga dia avy amin'ireo tranonkalan'ny governemanta. Mikendry ny fampifandraisana ny tombontsoan'ny fangaraharana, fandraisana andraikitra sy ny firotsahana an-tsehatra amin'ny maha-olompirenena miainga amin'ny fomba fijery ifotony, an-tambajotra ihany koa ilay fampidirana. Omen'ny ampahany faharoa amin'ilay tatitra ny topimaso rejionaly izay nadikan'ny tsirairay tamin'ireo mpikaroka ato aminay. Raketin'ireo topimaso ireo ny tantaran'ny hetsiky ny fitantanana tsara isaky ny faritra, ny andraikitry ny teknolojia ao amin'ny fampiroboroboana ny fangaraharana sy ny fandraisana andraikitra, ary koa famintinana ireo fikarohana noraketiny. Aravon'ilay fizarana farany ireo fanadihadiana tranga isaky ny lohahevitra mba hanatsoahana ireo fironana, famintinana sy tolokevitra azo ampiharina amin'ny tetikasa maro.
Ity misy fanitikitihana kely:
Tamin'ny Martsa 1989 ny nahaterahan'ny World Wide Web araka ny ahafantarantsika azy ankehitriny rehefa nanoratra tolo-kevitra ho ana sehatra Aterineto iray hahafahan'ireo rakitra an-tambajotra hifandray amin'ny iray hafa i Tim Berners Lee, mpikaroka tao amin'ny Fikambanana Eoropeana ho an'ny Fikarohana Niokleary (CVERN) tao Genève tamin'izany fotoana izany. Valo volana taty aoriana, tany amin'ny manodidina an'i Alemana, noravain'ny mpanao fihetsiketsehana ny Rindrin'i Berlin, ary nirodana niaraka tamin'izany ihany koa ny dimapolo taona mihoatra nitondran'ny governemanta kaominista tao Eoropa Atsinanana, Azia Afovoany sy tao Kaokazy. Hiatrika ny fiafaran'ny vanim-potoana famoretana ataon'ireo jadona miramila ao Amerika Latina, ny fahaterahan'ny demokrasia maro samihafa any amin'ny ampahany lehibe ao Afrika ambanin'i Sahara ary krizy ara-toekarena any Atsimo-Atsinanan'i Azia ihany koa ny folo taona ho avy, izay niteraka antso ho ana fitondrana lehibe kokoa sy fandraisana andraikitra bebe kokoa. Niara-nitombo ny World Wide Web sy ny hetsika ho an'ny fangaraharana ary ny fandraisana andraikitra tao amin'ny governemanta nandritra izay roapolo taona izay, na dia matetika mifanandrify aza, ary miaraka amin'ny fikarohana vitsy izay manombana ny andraikitra sy ny herin'ny teknolojia an-tambajotra mba hitondra fangaraharana, fandraisana andraikitra, ary fandraisana andraikitra amin'ny maha-olompirenena bebe kokoa.
27 Jolay 2021Azia Afovoany sy Kaokazy